Huawei Mate 30 wuxuu iibiyaa hal milyan oo unug Shiinaha | Androidsis
Heerka Huawei Mate 30 ayaa la soo bandhigay toddobaad ka hor. Dhamaad heer sare ah oo nooga tagaya isbeddelo badan, laakiin taasi marka loo eego Yurub waxay keenaysaa dhibaato weyn, maadaama aysan heysan codsiyada Google ama marin u laheyn Adeegyada Play. Intaad xalinayso dhibaatadan, taleefannadan ayaa horay looga sii daayay Shiinaha, oo leh natiijooyin wanaagsan.
Tan iyo markii ay u muuqato mid cad in ay jirto xiisaha macaamiisha Shiinaha ee ku wajahan Huawei Mate 30. Marka uguyaraan calaamaddu way ogtahay inay ku kalsoonaan karto suuqa gudaha si loo wado iibinta qoyskan cusub ee taleefannada.
Saddex saacadood gudahood, mar hore ayaa la sii ballansaday in ka badan hal milyan oo unug oo ka mid ah Huawei Mate 30, ee labada moodel, ee Shiinaha. Sidaa darteed, waxaa jira daneyn ku saabsan dhamaadka-sare ee sumadda Shiinaha. Intaas waxaa sii dheer, waxay maareeyaan inay kudhaafaan qaabkan tirooyinka ay heleen P30 waxyar in kabadan lix bilood kahor.
Astaantu waxay leedahay rajooyin sare oo kala duwan, tan iyo markii ay rajeynayaan inay ka iibiyaan qiyaastii 20 milyan guud ahaan labada taleefan. Marka bilawgan wanaagsan ee Shiinaha hubaal waa kobcin. Intaa waxaa dheer inay caddeeyaan inay taageero ka haystaan ​​suuqooda qaran.
In kasta oo su’aashu tahay ma Huawei Mate 30kan ayaa yeelan doona guusha ay shirkaddu ka rajeynayso suuqa caalamiga ah. Maqnaanshaha codsiyada Google iyo hubanti la'aanta ku saabsan inay suurtogal tahay iyo inkale inay suurta gal tahay in lagu rakibo taleefanada waa wax culeys ku noqon kara bilaabashadooda Laakiin sumadda ayaa hadda ka shaqeyneysa xalka.
Taasi waa sababta aan u sugi doonno dhowr toddobaad ogow waxa ku dhici doona Huawei Mate 30. Waa telefoonno naga taga astaamo badan oo cusub oo xiiso leh, Tan lama inkiri karo. Dhibaatadu waxay tahay in muhiimadda haysashada Play Store iyo codsiyada Google ay miisaan culus ku yeelan karaan kiiskan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Huawei » Huawei Mate 30 wuxuu iibiyaa hal milyan oo unug saddex saacadood gudahood
Sida looga hortago YouTube-ka ku jira Android inuu cuno xogta moobiilka